Budata Kaspersky Free Antivirus maka Windows
Budata Kaspersky Free Antivirus
Free Budata maka Windows (3.40 MB)
Budata Kaspersky Free Antivirus,
Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free) bụ antivirus nefu na ngwa ngwa maka ndị ọrụ Windows PC ibudata. Kaspersky Free Antivirus 2020 bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi netiti mmemme antivirus free.
Kaspersky Security Cloud Free bụ otu nime mmemme antivirus na-akwụghị ụgwọ maka Ohere. Ihe nchebe antivirus ọhụrụ na-echebe megide nje na PC gị na ngwaọrụ gam akporo, na-echekwa ma na-echekwa okwuntughe gị, akwụkwọ nkeonwe, na-ezipụ data ị zitere ma nata na ntanetị na VPN
Kaspersky Security Cloud na-abịa na nefu, teknụzụ nchebe na-enweghị isi ma na-enyocha data oge na egwu ọhụrụ iji nyere aka kpuchido PC gị na ngwaọrụ mkpanaka site na nsogbu dị iche iche. Ihe omume antivirus a na - akwụghị ụgwọ, nke na - eme nyocha na ihicha, na - echedo PC na ngwaọrụ mkpanaka gị, gụnyere iPhone gị, megide nje, nje faịlụ, ngwa ndị dị egwu na saịtị dị ize ndụ. Ngwa antivirus a nefu na-enye nchebe na-enweghị igbochi ọrụ gị. A na-ebudata mmelite na-akpaghị aka; nke pụtara na a na-echebe gị mgbe niile megide egwu egwu ọhụụ.
Kaspersky Security Cloud Free na-echebe gị pụọ na nje na ngwaọrụ gị niile. The free version naanị awade antivirus nchedo. Enwere nsụgharị nwere njirimara dị elu dịka VPN, njikwa okwuntughe, nlekota netwọk Wi-Fi nụlọ, ego echekwara (nchebe na ịzụ ahịa nịntanetị na azụmaahịa ịntanetị), nchebe ụmụaka.
Kaspersky Free Antivirus Ụdịdị
Nha faịlụ: 3.40 MB
Mmepụta: Kaspersky Lab
Kacha ọhụrụ na: 04-07-2021